လက်တွေ့နဲ့မတူ ကွဲပြားခြားနေသော နာမည်ကြီး အယူအဆ အမှား (၁၈) ချက် – One Daily Media
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် နေ့စဉ်လက်တွေ့ဘဝမှာ လက်ခံ ယုံကြည်နိုင်ရန် ခက်ခဲသော ထူးဆန်းသည့်အချက်အလက်တချို့ရှိနေပါတယ် ။
ယခုတစ်ဖန် စုစည်းဖော်ပြပေးလိုတာကတော့ ကျွန်ုပ်တို့အများစု ယုံတမ်းစကားသဖွယ် အထင်မှားယုံကြည်မိနေတဲ့ အဆိုအမိန့်တချို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၈) Viking မျိုးနွယ်စုတို့ရဲ့ ဦးချိုခေါင်းဆောင်း
သမိုင်းဝင်အ‌ထောက်အထားများ တွေ့ရှိရခြင်း မရှိပါဘူး ။Viking မျိုးနွယ်စုတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်းမှာပါရှိတဲ့ ဦးချိုများဟာ အနုပညာရှင်များက ၁၉ရာစုနှစ်မှာ ဖန်တီးထားသော လက်ရာများသာဖြစ်ပါတယ်။
(၁၇) ညဘက် အစားစားခြင်းဟာ ကယ်လိုရီ ပိုတက်စေပါသလား
မည်သည့်အချိန်တွင်စားသည်ဖြစ်စေ စားသုံးသည့် ကယ်လိုရီ ပမာဏကသာ အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၆) ကမ္ဘာမြေဟာ နွေရာသီမှာ နေနဲ့ပိုနီးပြီး ဆောင်းရာသီမှာ နေနဲ့ဝေးကွာနေပါသလား
ကမ္ဘာဟာ‌နေကို လှည့်ပတ်နေခြင်း နှင့် တိမ်းစောင်းနေသော ကမ္ဘာ့ဝင်ရိုးစွန်း တို့ကြောင့်သာ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲ ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ထိုကဲ့သို့သာ မတိမ်းစောင်းနေပါက ကမ္ဘာနေရာအရပ်ရပ်တို့ဟာ နေ့/ညအချိန်များ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြစ်ပေါ်နေမည်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၅) Black Holes ဆိုသည်မှာ အမှန်တကယ်ပင် တွင်းနက်ကြီးများလား
တကယ်တမ်းတွင်တော့ Black Holes ဆိုသည်မှာ ဘောလုံးသဖွယ် အလုံးကြီးတစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး အနီးအနားရှိအရာများအပေါ် ဆွဲငင်အားသက်ရောက်မှု အလွန်ကြီးမားပါတယ်။
(၁၄) ခရေစေ့တွင်းကျမှတ်မိနိုင်သော မှတ်ဉာဏ်
အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်အတွက် သိပ္ပံနည်းပညာအရ အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ သဘာဝတရားက ပေးစွမ်းထားသော မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကို နည်းစနစ်ကျကျ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၏ ရလဒ်သာဖြစ်ပါတယ်။
(၁၃) ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိမ်းများက ချက်ပြုတ်ထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များထက်ကျန်းမာရေးပိုကောင်းစေသလား?
အသီးအရွက်တိုင်းအတွက် မမှန်ကန်နိုင်ပါဘူး။ မုန်လာဥ ၊ အာလူး ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ဂေါ်ဖီထုပ် အစရှိတဲ့ အသီးအရွက်များဆီမှ သတ္တုဓာတ်များကို ခန္ဓာကိုယ်အတွက် စုပ်ယူရာမှာ ချက်ပြုတ်ပြီးမှ စားခြင်းက အစိမ်းစားခြင်းထက် (၆-၇) ဆ ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
(၁၂) သွားများဟာ ဖြူဝင်းနေမှကျန်းမာသည်လား?
သွားများဖြူဝင်းနေခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်း သွားဆရာဝန်များစွာက ရှင်းပြပြောဆိုထားကြပါတယ်။ ကိုယ်တွင်း ကယ်လ်ဆီယမ် ချို့တဲ့မှုကြောင့်လဲ သွားများဖြူနေနိုင်ပါတယ်။
(၁၁) ဖားများကို ကိုင်တွယ်ခြင်းဟာ ကြွက်နို့ပေါက်စေသလား
ကြွက်နို့ဟာ Virus ပိုးကြောင့် ပေါက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး တိရစ္ဆာများမှတစ်ဆင့် မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။
(၁၀) ကမ္ဘာမြေကြီးက ဝိုင်းစက် လုံးဝန်းပါသလား
ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ ကမ္ဘာ့ကုန်းမြေထု၏ အဆက်မပြတ်ရွေ့လျားမှုများကြောင့် ပုံသဏ္ဍာန်များလဲ အစဉ်အမြဲ ပြောင်းလဲလျက်ရှိပါတယ်။သို့သော် ရွေ့လျားနှုန်းဟာ အလွန်သေးငယ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် (၅)စင်တီမီတာ ခန့်သာရှိပါတယ်။
ထို့ရွေ့လျားပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ စက်ဝိုင်းသဏ္ဍာန် စစ်စစ်မဟုတ်ပဲ သစ်တော်သီးသဏ္ဍာန်လဲ ရှိတတ်ပါတယ်။
(၉) လူတစ်ဦးဟာ အာကာသထဲ ရောက်လျှင်ပေါက်ကွဲထွက်သွားမည်လား
အာကာသထဲတွင် အောက်ဆီဂျင်မရပါက သတိလစ်မေ့မျောခြင်း ၊ အသက်ရှူကျပ်ကာ သေဆုံးခြင်းများ အချိန်တိုအတွင်း တွေ့ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
(၈) Sunscreen များက အရေပြားကင်ဆာ ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသလား
Sunscreen သုံးခြင်းဟာ ကောင်းသောအလေ့အထတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း အရေပြားကင်ဆာကိုတော့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။မတည့်သော Sunscreen သုံးမိလျှင်ပိုဆိုးသွားခြင်းမျိုးတောင် ရှိတတ်ပါတယ်။ SPFမည်မျှပင် များစေကာမူ (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
(၇) Microwave မီးဖိုများက အစားအသောက်များကို အာဟာရလျော့နည်းစေပါသလား
မည်သည့်ချက်ပြုတ်နည်းဖြစ်စေ အာဟာရဓာတ်များကို အနည်းငယ်လျော့နည်းစေပါတယ်။
(၆) လျှာခေါက်ခြင်းဟာ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်လား
လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များရ ပါရမီ တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် မဟုတ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ (၅၄)ရာခိုင်နှုန်းသော အသက် ၆နှစ်မှ ၇နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်များ နှင့် (၆၇)ရာခိုင်နှုန်းသော အသက်၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးများဟာ ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။
(၅) ရေညှိဟာ သစ်ပင်များ၏ မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင်သာ ပေါက်လေ့ရှိပါသလား
မမှန်ကန်ပါဘူး။ နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှု နည်းပါးခြင်းနှင့် စိုစွတ်မှု များခြင်း တို့ကြောင့်သာ မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာ ရေညှိများကို ပိုမိုမြင်‌တွေ့ရလေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) အမွှေးမျှင်ရိတ်သောနေရာများတွင် ပိုမိုထူထပ်စွာပေါက်ပါသလား
လူအများစု အထင်မြင်လွဲမှားနေသော ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။အမွှေးအမျှင်များဟာ အရင်းမှရှည်ထွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အဖျားမှရှည်ထွက်ခြင်းမဟုတ်တာကြောင့် အမွှေးအမျှင် ထူထပ်ခြင်း ၊ အရှည်မြန်ခြင်းများသာ ရိတ်ခြင်း မရိတ်ခြင်းနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူး။
(၃) နှာခေါင်းသွေးလျှံသည့်အခါ ခေါင်းမော့ထားရန် လိုအပ်ပါသလား
မှားယွင်းသော အယူအဆ ဖြစ်ပါတယ်။ နှာခေါင်းသွေးလျှံစဉ် လှဲလျောင်းခြင်းကြောင့် သွေးများဟာ လည်ချောင်းသို့ရောက်ရှိပြီး အသက်ရှုခက်ခဲခြင်းများ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်အနေအထားဖြင့်သာ နေရမည်ဖြစ်ပြီး ရေခဲစိမ်ထားသော ရေစိုဝတ် အသုံးပြုခြင်းက နှာခေါင်းသွေးကြောများကို တင်းကျပ်စေပြီး သွေးတိတ်ရန် အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
(၂) ချောကလတ်စားခြင်းကြောင့် ဝက်ခြံပေါက်စေပါသလား
ဝက်ခြံပေါက်ခြင်းဟာ ချောကလတ်စားခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များက ဖော်ထုတ်ရှင်းပြထားပါတယ်။
(၁) နို့ထွက်ပစ္စည်းများကြောင့် အရိုးများ ပိုမိုသန်မာစေပါသလား
အရိုးကျိုးခြင်းဟာ နို့ပမာဏ မည်မျှသောက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ခြင်းမရှိကြောင်း လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များအရ သိရပါတယ်။ ထို့အပြင် နို့သောက်ခြင်းကြောင့်ပင် Osteoporosis ဟုခေါ်သော အရိုးပွရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်‌ချေ ပိုမိုမြင့်တက်နိုင်ကြောင်း ဆောင်းပါးများပင် တွေ့နေရပါတယ်။
ယခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ ‌အကြောင်းအရာများကနေတစ်ဆင့် စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအတွက် မှန်ကန်သော ဗဟုသုတများ ရရှိသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။